Pet Mkpa Manufacturers & Suppliers | China Pet Mkpa Factory
Pet roomgba Ude Mkpa Scissor
A na-eji ihe eji akwa akwa na-eme ka anụ a na-eji eme akwa, nke nwere ogo 70-80%, ọ gaghị adọta ma ọ bụ ghọta ntutu mgbe ọ na-egbutu ya.
A na-eme elu ahụ site na teknụzụ titanium alloy agụụ, nke na-enwu gbaa, mara mma, dị nkọ ma na-adịgide adịgide.
Nke a na - ejizi anụ ụlọ ga - abụ onye inyeaka kachasị mma maka igbutu ajị agba na ụyọkọ kachasị sie ike, na - eme ka ịcha mma mara mma.
Petississing thinning scissor dị mma maka ụlọ ọgwụ anụmanụ, ebe a na-ere anụ ụlọ, yana nkịta, nwamba na ezinụlọ ndị ọzọ. Nwere ike ịghọ ọkachamara ọkachamara na anụ eji achọ anụ ụlọ n'ụlọ iji chekwaa oge na ego
Pet Isi tingcha Mkpa
Ezé 23 dị na mma agụba na-eme nke a ka ọ bụrụ ihe mkpa magburu onwe ya.
A na-eji ntutu isi ntutu isi nke isi maka thinning.it enwere ike iji ya mee ihe dị mfe, dabara maka ụdị ajị niile. Igwe na-acha ọkụ ma dị nro na-eme ka igbutu nkịta ndị na-adịchaghị mma ma dị mfe, onye ọ bụla nwere ike iji ya kpụọ ntutu.
Site na mkpịsị ntutu dị nkọ ma dị irè, ị ga-ahụ iji ejiji anụ ụlọ gị esighị ike ma ọlị.
Ọkacha nkịta na-achọ ịlụ nwanyị
Pet na-edozi Scissor Set
Mmanya scissor setịpụrụ gụnyere scissor kwụ ọtọ, scissor scissor, scissor curved, na ogologo ọkụ. Ọ bia na akpa scissor, ihe niile ịchọrọ dị ebe a.
A na-eji igwe anaghị edozi igwe eji achọ mma. The scissor bụ elu sharpness, inogide na mbo siri ike maka ogologo oge ojiji.
The roba na mkpa bụghị nanị ike belata mkpọtụ iji jide n'aka na ahụrụ n'anya agaghị atụ egwu, kamakwa zere aka-egweri mmerụ ahụ.
A na-edebe anụ ụlọ na-edozi anụ ụlọ na akpa, ọ na-eme ka ọ dịrị ha mfe iburu ma debe. Nke a set suut niile gị Pita si ejiji mkpa na chọrọ.
nkịta eji achọ mma
Ihe nkedo a na-akpụzi nkịta dị mma maka ịkpụchasị isi, ntị, anya, ụkwụ na-agbanwe agbanwe, na ụkwụ.
Nkọ dị nkọ na-enye ndị ọrụ ahụ ezigbo ahụmịhe dị jụụ ma dị jụụ, mgbe ị jiri ihe nkedo a gwọrọ agwọ, ị gaghị adọta ma ọ bụ dọpụta ntutu anụ ụlọ.
Nhazi ihe eji arụ ọrụ na-enye gị ohere ijidesi ha ike ma belata nrụgide n'ubu gị. Ihe a na-eme nkịta a na-eji aka gị abịa na mkpịsị aka na mkpịsị aka iji tinye aka gị maka njide dị mma mgbe ị na-egbutu.